ब्यङ्ग्य पचाउन नसक्ने अबस्थामा कसरी पुग्यो सिंहदरबार !| Nepal Pati
काठमाडौं । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा पनि एक हो । जसलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकमा समावेश गरिसकेको छ । सरकार जनताका लागि हो वा जनता सरकारका लागि भन्ने प्रश्न पछिल्लाे समय उठ्ने गरेकाे छ । नेपालको इतिहासमा छोटो समयमा धेरै किसिममा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए । जनता माथि कम भन्दा कम शासन हुनुपर्ने संविधानविदहरुको तर्कलाई शासकहरुले कहिल्यै रुचाएनन । तसर्थ शासकहरुले जनताहरुलाई रिझाउनको सट्टा दमनको सहायता मार्फत कुर्सीमा टिक्ने क्रियाकलापमा दिनहरु बिताउन राजी भए ।
जनतालाई जागरुक बनाउँदै जनताकै शक्तिको मार्फत परिवर्तन भएका वा गरिएका अनेकौं शासन व्यवस्था पनि व्यवस्था जनताबाट टाढा हुँदै उहि पुरानो राणा, तथा राजामहाराजकै हुकुमी शैलीमा रमाउन पुग्यो । फलस्वरुप मुलकको शासन सत्ता समाल्ने निकाय सिंहदरबार जनतासँग एकाकार हुन सकेन ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि नाराहरु परिमार्जन गरिए । जनताको उत्साह,उमङग, इच्छा, चाहाना र आबस्यकतालाई निर्वाचन जित्ने माध्यम बनाइए । पछिल्लो समय मुलुक र मुलुकबासीलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको ललिपपमा भुलाएको महसुश आम जनताले गरिरहेको प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, पत्रपत्रिका लगायतका माध्यममा आइरहेका छन् ।
मुलुकमा नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै ढंगले समावेश भएको राजीतिक पार्टी मतपत्र मार्फत सिंहदरबारमा पुग्दा जनताले चाहेको जस्तो नतिजा देख्न, सुन्न र भोग्न नपाएको चर्चा वर्तमान सरकारको पछिल्लो गतिविधी र कार्यशैलीलाई मानिएको छ । विरासतमा सिंहदरबारले लिएर आएका तमाम विकृती र विसंगती घट्ने आसामा रहेका मुलुकवासीहरु वर्तमान वाम सरकार समेत पुरानै रोड म्यापमा हिड्ने तयारी गर्दै गरेको महसुस अकस्मात बढेको छ ।
मुलुकमा जनताले नचाहेको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी लगायतका समस्यामा सिंहदरवारले जनतासँग एकाकार हुँदै नयाँ नजिर स्थापना गर्नुको सट्टा पछिल्लो समय थपिएका समस्यामा बनेका गीत समेत सुन्न नसक्ने अबस्थामा वाम सरकार कसरी पुग्यो ? जनता हैरान छन् । विगतका अनेकौं तन्त्र र वादबाट निरास भएका मुलुकबासी वाम गठबन्धनको जनप्रिय घोषणापत्रलाई आधार मान्दै सिंहदरबार सुम्पीन राजी भएको कुरालाई अन्देखा गर्दै आफ्नै कार्यकालमा सिर्जित अलोकप्रिय घटना समेत सुन्न नसक्ने अबस्थामा कसरी पुग्याे ? गरीबी र छाप्रोबाट उठेको वाम राजनीति आफ्नो विगत बिर्सदै सुबिधा भोगी राजनीति मार्फत आलोचना समेत खेप्न नसक्ने दुखद अबस्थामा पुग्दा जनताको मन भाँचिएको मान्न सकिन्छ ।
सरकार गठनको एक वर्षको समयमा सरकारले तुलनात्मक रुपमा जनता सामु गरेका थुप्रै बाचाहरु बिर्सदै थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने शैलीले सिंहदरबार सपना बेच्नमै सिमित रहेको जनगुनासो बढ्दै छ । राजनीतिमा आलोचना सुन्न नसक्ने सिंहदरबार किन जनताका पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन । जनताले अन्यायमा पर्दा आन्दोलन गर्नै पर्ने परिपाटी आज सम्म किन हट्न सकेन ? हत्या, बलात्कार र हिंसाका घटनामा सरकारको चुस्त दुरुस्त उपस्थिती किन देख्न पाइदैन ?
संसदका समिति, उपसिमितिबाट करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार किन मौन देखिन्छ ? यातायात सिण्डिकेट मात्र हैन । सरकार ३३ किलो सुनकाण्ड कता पुग्यो भन्ने बारे बेखबर बनेको सिंहदरबार आखिर जनताको गुनासो र आक्रोश सुन्न नचाहाँदा आफ्नै खुट्टामा बञ्चराे हान्न तम्सिदैछ । सिंहदरबारले आफ्ना कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सके मात्रै सफल हुन्छ भन्ने उसका सल्लाकारहरु सुन्नै नसक्ने अबस्थाबाट ग्रुर्जदै छन् । हुँदा हुँदा एक जना कलाकार, जसले गीत संगीत बेचेर गुजारा गर्छ । राज्यलाई आफ्नो कला मार्फत सचेत तुल्याउने काम गर्छ । आखिर उसलाई समेत दबाबमा राख्ने कु- चेस्टाले सिंहदरबारको असली नियत, हैसियत र व्यवहार सर्वसाधारणले समेत देख्न र भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । ब्यङ्ग्य पचाउन नसक्ने अबस्थामा पुगेकाे सिंहदरबार वाम राजनीतिकाे निम्ती घातक हुन सक्ने जनताकाे प्रतिक्रिया मार्फत बुझ्न सकिन्छ ।